Ampitomboy ny fifamoivoizana - paikady 25 voaporofo hitombo
Ampitomboy ny fifamoivoizana amin'ireo paikady voaporofo 25 ireo
Alakamisy, Septambra 15, 2011 Alahady, Desambra 4, 2011 Douglas Karr
Ampitomboy ny fifamoivoizana… teny izay reko hatrany hatrany hatrany io. Tsy hoe tsy mino ny fitomboan'ny fifamoivoizana aho fa matetika ny mpivarotra dia miezaka mafy mampitombo ny fifamoivoizana ka hadinony ny manandrana mampitombo ny fihazonana na ny fiovam-po amin'ny fifamoivoizana efa ananany. Ireto ny paikady 25 voaporofo tsara indrindra naparitakay ho an'ny tranonkalantsika manokana sy ny mpanjifanay hampitombo ny fifamoivoizana… ary hiantohana fa hahazo valiny amin'izany izy ireo!
Fomba hampitomboana ny fifamoivoizana:
Manatsara ny tranokalanao fikarohana. Tsy isalasalana fa ity no fomba mora indrindra hampitomboana ny fifamoivoizana… ary ny tsara indrindra dia ny fifamoivoizana mifandraika mitady anao! Fantaro ireo teny lakile izay ilainao hampiasaina izay ampiasain'ny motera fikarohana.
Use lohateny mahasarika ny sain'ny olona. Fantatrao ve fa ny olona dia tsindrio fotsiny ny 20% lohateny izay novakiany? (Tsy nanao izany aho mandra-pamaky an'i Vince Robisch's lahatsoratra). Azonao atao ny mampitombo ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fifantohana bebe kokoa amin'ny lohateninao sy ny atiny.
Mampiasà fitaomana famaritana meta amin'ny pejinao sy ny bilaoginao. Ny famaritana Meta dia mety ho ny taha ahazoana taha ambonimbony kokoa amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana, io no paikady lehibe hampitomboana ny fifamoivoizana amin'ireo mpanjifanay.
Hamarino tsipelina sy fitsipi-pitenenana. Ny olona sasany dia tena sahiran-tsaina momba ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana, mamela tranokala iray raha vao mahita lesoka. Vao tsy ela aho no nahita CheckDog rehefa nisy olona nitatitra hadisoana tsipelina tamiko fa tsy fantatro hoe pejy iza.
Manomboha blôgy ary matetika sy tsy tapaka. Arakaraka ny anoratanao no misy ny fotoana mety hahitan'ny olona iray ny atiny. Arakaraka ny maha-mifanaraka anao hatrany no hahabetsahan'ny olona hahita atiny vaovao.
Manambola amin'ny famolavolana harena. Ny endrika tsara dia hisarika, ny endrika ratsy dia hampivily ny mpanjifa. Betsaka ny tranonkala mahafinaritra any misy atiny tsy mampino izay tsy mahasarika ny saina fotsiny satria ratsy tarehy fotsiny. Tsy voatery handany vola an'arivony maro ny endrika tsara… Misy tranonkala maromaro misy lohahevitra manana endrika mahafinaritra sy hatsarana tsy latsaky ny $ 20!
Ampio ny mombamomba anao na ny mpiasanao amin'ny tranokalanao. Tsy tian'ny olona ny mamaky drivel marketing, te-hahatsapa izy ireo fa mamaky hafatra avy amin'ny tena izy. Betsaka ny olona ho liana amin'ny tranokalanao na bilaoginao ary olona maro kokoa no hiverina ao amin'ny bilaoginao rehefa fantany fa tsy mifanerasera amin'ny mpanoratra an-tserasera tsy fantatra anarana izy ireo. Tena tiako ny mampiasa Google Profiles sy mari-pamantarana rel hametraka sary amin'ny valin'ny fikarohana nataonao koa!
Ampio ny adiresy ara-batana ary nomeraon-telefaona amin'ny tranokalanao. Ary indray, ny olona manafina ny mombamomba azy dia heverina ho tsy atokisana. Ampahafantaro ny olona ny fomba hahitana anao… ary mety ho gaga ianao amin'ny fitsidihana azonao rehefa mahita izy ireo! Ary koa, ny manampy adiresy ara-batana amin'ny tranokalanao dia mety hanatsara ny fahafahanao ho hita amin'ny valin'ny fikarohana eo an-toerana.
Ampidiro a fandaharana finday mankany amin'ny tranokalanao na bilaoginao. Nipoaka ny lazan'ireo finday avo lenta. Rehefa hitan'ireo mpampiasa finday avo lenta fa noforoninao ho an'ny fitaovany ny tranokalanao dia hiverina izy ireo. Ampitomboy ny fivezivezena amin'ny finday ary hitombo koa ny fifamoivoizana!
Mampiroborobo ny fisian'ny media sosialinao. Rehefa misy olona tia na manaraka anao, dia vao avy nanisy mpitsidika mety ho tafiditra ao amin'ny tambajotrao ianao. Ampitomboy ny tamba-jotra ary hampitombo ny habetsahan'ny fifamoivoizana avy amin'ny tamba-jotra sosialy ianao. Angataho ny tamba-jotra hifandray aminao hahafahanao manavao azy ireo indraindray sy ny atiny mifandraika amin'izany.
Manampia newsletter! Mpitsidika maro no tsy hahita izay ilainy… fa raha misy ifandraisany ilay tranokala na bilaogy dia hanaraka anao amin'ny media sosialy izy ireo na hisoratra amin'ny mailakao aza. Rehefa miverina amin'ny tranokalanao ianao dia hampitombo ny fifamoivoizana avy hatrany ny mailakao. Email marketing manana fihenam-bidy mahatalanjona… ary ny fiverenan'ny fifamoivoizana aza tsara kokoa!
Manampia rohy amin'ny sonia nataonao ary ampio izy ireo isaky ny mailaka mivoaka. Tsy fantatrao mihitsy izay hakanao ny sain'ny olona iray… ary mazava ho azy fa efa manana fifandraisana amin'ilay olona andefasana imailaka ianao.
Use menus fitetezana mahomby. Ny fitetezana mahomby dia mahatonga ny tranokalanao ho mora ampiasaina ary hitazona ny fifamoivoizana hiverina. Ny fametrahana ny singa fitetezana malaza dia hampahafantatra ny motera fikarohana izay singa manan-danja ao amin'ny tranokalanao.
Omeo fitaovana fifandraisana toy ny calculatera, fanadihadiana, ary fampisehoana. Tsy dia mamaky araka ny noeritreretinao ny olona… maro no mitady tsotra fotsiny ny fitaovana mety hahazoana ny vaovao ilainy. Ny calculer tsara amin'ny tranokala iray dia hitazona ny olona hiverina hatrany hatrany.
Mampiasà sary, tabilao ary sary. Ny sary sy ny tabilao dia tsy vitan'ny hoe manampy ny olona hahatakatra sy hahatadidy ny fampahalalana, ny paikady toy ny infografika dia manamora ny fizarana izany vaovao izany ary mampita izany. Ary koa, ny ankamaroan'ny tranonkala sosialy dia mampiditra topi-maso sary toy ny ao amin'ny Facebook.
Mampiroborobo ny mpitarika indostria hafa sy ny bilaogin'izy ireo. Ny firesahana ny namanao dia fomba tsara hisarihana ny sain'izy ireo. Raha mendrika ny atiny anao dia zarain'izy ireo amin'ny mpihaino azy izany. Betsaka amin'ireo mpitarika ireo no manana mpijery tena lehibe. Matetika, rehefa misy mpiara-miasa manonona ahy, voatery haneho hevitra ao amin'ny tranonkalany aho ary hizara ara-tsosialy ny mpihaino ahy. Raha tsy mampino ny atiny dia angamba hizara lahatsoratra momba azy aho. Hiteraka rohy miverina avy amin'ny tranokalako mankany amin'ny azy ireo izany, zana-trondro vaovao handehanan'ny fifamoivoizana.
Manampia bokotra sosialy ary fitaovana fanoratam-boky sosialy toy ny Twitter, Facebook, LinkedIn, Google ary StumbleUpon hahafahana miteny am-bava. Io dia ahafahan'ny mpihaino anao mampiroborobo anao… maimaimpoana .. ho an'ny mpihaino azy! Midika zavatra betsaka kokoa izany matetika raha misy olona ao amin'ny tambajotranao manoro ny atiny. Ny fifantohana amin'ny fizarana ara-tsosialy dia niteraka fitomboan'ny fifamoivoizana lehibe indrindra hitan'ny tranokalantsika.
Aloavy ny fampiroboroboana. Raha toa ianao ka nametraka ezaka tamin'ny lahatsoratra mahafinaritra, nahoana ianao no tsy mandoa vola hampiroborobo izany? Raha manana rohy ara-tsosialy ao amin'ny tranokalanao toa anay izy ireo, dia ho saro-kenatra ny mpitsidika sasany rehefa mahita ny 1 sy ny 0 amin'ny bokotra sosialinao. Misy tambajotra tsara any misy olona hamerina mandefa tweet, toy ny ary +1 ny atiny ho an'ny kely na tsy misy.
Atsipazo ny atiny taloha. Satria efa antitra ny atiny dia tsy midika izany fa lany andro. Aza mampiasa daty amin'ny fananganana URl sy famoahana lahatsoratra - tianao ho azo antoka fa mihevitra ny mpihaino anao ho mavitrika ary mbola manan-danja hatrany ny atiny. Indray mandeha isam-bolana dia zahao ireo atiny milahatra tsara amin'ny fampiasana fitaovana toy izany Semrush ary manatsara ny lohatenin'ny pejy, ny atiny ary ny angona meta ho an'ireo teny lakile nalahany.
Mandehana fivezivezena be dia be miaraka fifaninanana, fampiroboroboana ary valisoa toy ny PunchTab. Ireo tetika ireo dia tsy mamokatra mpitsidika matetika indrindra, fa satria miteraka buzz sy fampiroboroboana izany dia hihazona ny sasany amin'ireo fifamoivoizana vaovao ianao.
Aza atao ambanin-javatra ny herin'ny haino aman-jery nentim-paharazana, indrindra raha tsy miasa amin'ny sehatry ny haitao ianao. Ny resaka ao amin'ny indostria sy ny magazine, ny fampisehoana fampiroboroboana ny varotra, ny carte d'exploitation, na ny faktiora aza… ny fanomezana URL ny olona ao amin'ny tranokalan'ny orinasa, bilaoginao ary ireo tranokala sosialy dia hampitombo ny fifamoivoizana. Fifandraisana amin'ny vahoaka misy ifandraisany amin'ny indostria ny olona ary manana fotoana sy talenta izy ireo hamaritana ny tantaranao… tsy izany. Ny sasany amin'ireo fifamoivoizanay tsara indrindra dia tamin'ny alàlan'ny mpanao gazety nentim-paharazana tao amin'ireo orinasan-tserasera lehibe izay nanoratra momba anay na nanadinadina anay.
Tsinjarao ny atiny ao vondrona indostria on LinkedIn sy forum. Ny olona sasany dia misarika ny sain'ny vondrona sasany, fa ny sasany kosa mazoto be - ary rehefa hitan'ny olona fa manampy anao ianao ary mahalala ny entanao dia hiverina amin'ny tranokalanao ihany izy ireo amin'ny farany. Mety ho hitany amin'ny alàlan'ny karoka ihany koa ny dinikao.
Toy ny vondrona indostrialy manampy amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana, dia toy izany koa mamaly fanontaniana mifandraika amin'izany Fanontaniana sy valiny toerana. Ny sasany amin'izy ireo aza mamela anao hijery rohy amin'ny valinteninao. Ireo tranonkala Q&A dia nalaza tamin'ny lazany nefa toa niadana kely. Saingy, eo no itadiavan'ny olona valiny - ary raha manana rohy mankany amin'ny atiny ianao amin'ny fanontaniana lehibe dia averin'izy ireo amin'ny tranokalanao izany.
Fikarohana sy fanaraha-maso ara-tsosialy ho an'ny teny fanalahidy voalaza ao amin'ny fifanakalozan-kevitra fa afaka manampy ny tranokalanao na ny bilaoginao. Manana fampandrenesana natsangana ho an'ny mpifaninana anarana, anaran'ny vokatra, teny fanalahidy indostrialy ve ianao? Ny famerenana ireo tsy tapaka dia hampiharihary anao amin'ny mpihaino marobe mety ho mpitsidika. Izy io koa dia hanangana ny tambajotrao manokana sy ny fahefanao rehefa manome fampahalalana sarobidy ianao.
Link-baiting dia mbola fomba iray mahomby amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana. Araka ny Search Engine Journal, Karazan-dahatsoratra 5 toa mamorona backlinks be dia be sy hetsika virosy maro. Izy ireo dia Vaovao, Fifanoherana, fanafihana, loharano ary hatsikana. Ity lahatsoratra bilaogy ity, ohatra, dia famoahana loharanom-baovao.
Tags: mampitombo ny fifamoivoizana
Fomba roa tena mandaitra hampitomboana ny lisitry ny mailakao
Drafitra famerenana WordPress… Nahazo iray?
3 Desambra 2011 à 9:19
Ekeko tokoa. Tsy zakako ny “mpanoratra votoaty tsy fantatra anarana”. ^-^
Sep 24, 2013 amin'ny 2: 16 AM
Lisitra lehibe. Ho fanampin'izany, mampiasa sary tsara tarehy amin'ny pejiko ihany koa aho ary mizara izany amin'ny Pinterest, Facebook, Instagram ary rohy mankany amin'ny tranokalako. Manampy amin'ny fampitomboana ny mpihaino sy ny fifamoivoizana koa ny famoronana dikan-fampisehoana amin'ny atiko sy ny fizarana azy ireo ao amin'ny SlideShare.net, Scribd ary ireo tranonkala fifampizaràna rakitra hafa.